Indlela Yokufunda Ukuba Unayo Amaminithi OkwiCram
Indlela Yokufunda Ukuba Wena Unayo Amaminithi
Ukhona apho, kunene? Ukhohliwe malunga nokuvavanya (okanye ukukhawuleza) waza waqonda ukuba unelithuba elingaphantsi kweyure ukufaka ulwazi oluninzi njengoko unako. Kwimeko leyo, abanye abantu babeya kuxhomekeka kwiphepha lokukopela, elingelona lihle. Ngakolunye uhlangothi, akumele uyenze loo nto. Funda indlela yokunyamezela uvavanyo ngokufanelekileyo, kwaye ufunde ukuvavanywa kwakho nokuba ngaba unethuba elifutshane.
1. Hamba kwindawo ethile
Intloko elayibrari okanye eklasini elithulileyo xa usesikolweni. Ukuba ufunda ekhaya ngaphambi kokuvavanya, vala iTV, vala iseli yakho, kunye namandla phantsi kwekhompyutha. Yiya ekamelweni lakho. Xelela bakho abahlobo ukuba bakushiye bodwa ngoku. Ukuba unesihlandlo esifutshane nje sokubamba, uzakufuna i-100% yengqwalasela yakho.
2. Funda Isikhokelo Sokufunda
Uninzi ootitshala bayaphonononga izikhokelo zokufunda malunga novavanyo olukhulu. Ukuba utitshala wakho ungomnye wabo, sebenzisa ngoku. Ukuba kufuneka uphonononge uvavanyo, nguyena kuphela umthombo onokuwusebenzisa. Yikhumbule yonke into kuyo, usebenzisa izixhobo ze-mnemonic ezifana ne-acronyms okanye ingoma. Ungakhathazeki ukwenza ii-flashcards kweli nqaku-uza kuchitha ixesha.
3. Ukukrazula iNcwadi
Ukuba ulahlekisile isikhokelo sakho sokufunda okanye awufumani omnye kumfundisi wakho, uze ubambe ipeni kunye nencwadana nenhloko kwincwadi. Funda amaphepha amabini okuqala kweso sahluko esicetywayo kuvavanyo, efuna iingcamango ezinkulu, isigama kunye neengcinga.
Gqamisa nantoni na isibindi okanye ugxininise ngamagama akho kwi-notebook yakho. Funda iphepha lokugqibela kwisahluko ngasinye, kwakhona, ukuphendula imibuzo yokubuyiselwa entloko yakho. Ukuba awukwazi ukufumana impendulo kumbuzo wokubuyiselwa, jonga kwakhona kwincwadi. Mhlawumbi umbuzo ovavanyo.
Ukuba usenayo ixesha, thatha amanyathelo angaphezulu.
1. Ukuphonononga amanqaku akho, imibuzo kunye nezabelo
Utitshala wakho mhlawumbi wadala uvavanyo lwakho olusekelwe kumanqaku, imibuzo kunye nezobelwe azinikezele ngexesha leyunithi. Ukuba uyigcine, (kwaye uhlala phambi kovavanyo lwakho lokugqibela), ngoko ufunde yonke into ongayenza, ukukhumbula ngeenkcukacha kumaphepha.
Ngoku akusiyo ixesha lokuzingela umhlobo wakho omhle kwaye unombuzo wakhe. Le ngqungquthela! Uza kulahla ixesha lokufumana uhlolisiso lomhlobo! Endaweni yoko, faka iimpendulo kwisicatshulwa sokufunda kunye nemibuzo yakho. Gqungqa izinto ongazazi kwaye ubuyele kubo ukuze zivuselele ngokukhawuleza.
3. Cela Umfundi Olungileyo Uncedo
Ukuba awufumani naluphi na lwezixhobo zakho zokufunda, funda i-kid ehlakaniphile kunazo zonke eklasini uze ucele ukuboleka isifundo sakhe sokukhokela. Kanangcono? Menze ukuba afunde nawe. Abafundi abalungileyo bathanda ukubonisa indlela abahlakaniphile ngayo. Sebenzisa le ego kumsebenzi wakho kwaye ubavumele ukuba bancede ufumane ibakala elingcono ngokukuxelela izinto ezibaluleke kakhulu ukuba wazi ngovavanyo lwakho.
Iingcebiso zokuthatha uvavanyo
Bhala phantsi izixhobo zakho zeMnemonic: Bhala phantsi izixhobo zakho zeemmonic ekuhlolweni kwakho ngokukhawuleza nje xa utitshala enika yona ngaphambi kokuba ukhohlwe iimpawu zakho kunye neentetho ozidalileyo ukukhumbula izinto.
Emva kokuba uqale ukuvavanya, ungababala!
Cela uMfundisi ukuba ancede: Ukuba ulahlekile xa uvavanya, vuka uphakamise isandla sakho ubuze uthisha ukuba uncede xa unamathela kwinto ethile. Ootitshala baya kuhlala bekhokela ekuncedeni ukuba ngaba unzima, ingakumbi ukuba ungumfundi ozama ngokuklasini. Ukuba ukukhwabanisa kukuziphatha kwakho okuqhelekileyo, kunjalo, mhlawumbi umele uzinikele ngokwakho!